Laba filim oo Soomaaliyeed oo midi ka hadlayay taariikhdii Daraawiishta oo 35 sanadood ka hor lumay oo laga helay Hindiya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Laba filim oo Soomaaliyeed oo midi ka hadlayay taariikhdii Daraawiishta oo 35...
Laba filim oo Soomaaliyeed oo midi ka hadlayay taariikhdii Daraawiishta oo 35 sanadood ka hor lumay oo laga helay Hindiya
Filim Soomaaliyeed oo qadiimi ahaa oo lumay 35 sanadood ka hor ayaa baaritaan dheer kaddib waxaa laga helay Keydka Filimmada Qaranka Hindiya (NFAI) ee ku yaalla magaallada Pune ee gobolka Maharashtra oo ah magaallada labaad ee ugu weyn gobolkaasi marka laga reebo Mumbai.
Filimkan oo lagu magacaabo ‘The Somali Dervish’ oo 4 saacadood soconaya ayaa waxaa sanadkii 1985-kii sameeyay abwaanka iyo filim sameeyaha Soomaaliyeed Saciid Saalax Axmed, waxaana uu ka hadlayay taariikh laga sameeyay halgankii Daraawiishta ee u hoggaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan.
Waa taariikh si weyn loo baadi goobayay oo ku saabsan halgankii Sayidka ee 20 sanadood uu kula jiray gumeystihii Ingiriiska dhammaadkii Qarnigii 19-aad iyo horraantii qarnigii 20-aad illaa intii uu ka geeriyooday 1920-kii.
Filimkan Daraawiishta waxa uu Abwaan Saciid Saalax bilaabay 1983-kii, waxaana la dhameeyay 1985-kii, waxaana filimkan soo saartay shirkad aflaamta sameysa oo Hindiya laga leeyahay oo fadhigeedu ahaa Mumbai.
Maamulaha Keydka Filimmada Qaranka (NFAI), Prakash Magdum oo la hadlayay ‘The Hindu’ ayaa sheegay in helidda filimkani uu muhiimad gaar ah u leeyahay dhaxalka aflaamta Soomaaliyeed.
Abwaan Saciid Saalax ayaa markii ay dagaallada sokeeye ka billowdeen Soomaaliya waxa uu u guuray Mareykanka, gaar ahaan Minnesota, waxaana filimkan markii ugu dambeysay ee uu lumay lagu arkay Abu Dhabi, iyadoo wixii waqtigaa ka dambeeyayna lagu xisaabiyay inuu lumay.
Waxa uu Saciid Saalax filimkan uu ahaa kiisii ugu horreeyay ee uu sameeyay uu ka raadiyay Maktabadda Washington iyo Film Volts oo Paris ku taalla, hase yeeshee waa uu ka quustay.
Intaa kaddib waxa uu Abwaan Saciid oo 74 jir ah uu la xiriiray Mark Brecke, oo ah filim sameeye iyo sawir qaade ku guuleystay abaalmarinno dhowr ah, kaasoo diiradda saara meelaha ay colaadaha iyo isir tirtirku ka dheceen, iyadoo Brecke uu la xiriiray keydka Filimmada (NFAI) ee Hindiy.
Baaritaan dheer kaddib waxaa lagu guuleystay in la helo filimkan ‘The Somali Dervish’, waxaase yaab leh in baaritaankaasina lagu helay filim kale oo la magac baxay (A Future for Somalia), kaasoo la sameeyay 1978-kii, hase yeeshee lumay.
“Maanta aad ayaan u faraxsanahay, mana hayo erayo aan ku cabiri karo farxaddeyda maadaama filimkaygii laga helay NFAI, waxay la mid tahay sida inaad ubadkaaga dib u hesho sanado badan kaddib” ayaa laga hayaa Saciid Saalax oo dib u helay baadi Soomaaliyeed.